XIISE CUSUB: Kooxda AC Milan oo maalintii 1-aad laga iibsadey 45 kun oo tigidh (Waa koror dhan 2000%) – Gool FM
(Milano) 20 Luulyo 2017 – Kooxda Rossoneri oo sanadihii dambe ay aad uga jajabnayd ayaa mar qura u muuqata mid dhulka ka kaceeysa kaddib markii uu soo laabtay xiisihii loo hayn jirey kooxda oo beryihii dambe hurdo ku jirey.
Tusaale ahaan, AC Milan ayaa sanad kahor waxay iibisay 16 kun oo tigidh oo qura marka ay timaaddo tigidhada fasalka ee hal mar la jarto ee garoonka San Siro, iyadoo uu Marco Fassone sheegay inuu ugu yaraan laba jibbaari doono tiradaasi.
Yeelkeede, warsidaha Il Giornale ayaa maanta qoraya in maalintii 1-aad oo qura ay tigidhada Milan ee fasal-ciyaareedka iibsadeen 40 ilaa 45 kun oo tigidh, taasoo ka dhigan koror gaaraya 2000% marka loo eego sanadkii tegey.
Haddii maalintii 1-aad ee la furay iibsiga tigidhada la gatay in ka badan 40,000 waxay taasi guul uga dhigan tahay maamulka cusub ee Rossoneri oo sameeyay sabab ay taageerayaashu mar kale ugu kalsoonaan karaan mashaariicda iyo hanka kooxda taasoo keentay inay soo camiraan gegada caanka ah ee San Siro.
Unai Emery oo ka hadlay wararka Neymar la xiriirinaya PSG